registery, task mgr, run တွေကို ဖွင့်လို့မရအောင် ဘယ်လိုလုပ&#4153 — MYSTERY ZILLION
registery, task mgr, run တွေကို ဖွင့်လို့မရအောင် ဘယ်လိုလုပ&#4153
အချို့ internet ဆိုင်တွေမှာ registery, task manager, run တွေကိုဖွင့်လို့ မရအောင်လုပ်ထားပါတယ်........ ဖွင့်လိုက်ရင် Admin နဲ့ပါတ်သက်တဲ့ စာကြောင်းတွေပေါ်လာတတ်ပါတယ်........ အဲ့ဒီလို ဖွင့်လို့ မရအောင် ဘယ်လို လုပ်ပါသလဲ........
task mgr ကိုတော့ ကိုစေတန်ရဲ့ Virus အကြောင်းရေးတဲ့အထဲက ဖတ်မိလို့ သိပေမယ့် ကျန်တာတွေ ကို ဘယ်လို ပိတ်ရပါသလဲ ခင်ဗျာ.............. ကျေးဇူးပြု၍...........:77:
အဲဒါလေးနဲ့တော့ ပြန်ဖွင့်ရင်တော့ ရတယ်လေ...
Run Command ပိတ်တာက
This was done by user rights. They create user account for login to that computer that was not administrator therefore if you try something that can do by administrator then will ask administrator passwords. No special tricks but have to know ad min password to do your mention tasks.
အကိုရေ တုံးတယ်လို့ပဲပြောမလား၊ ထုံတယ်လို့ပဲပြောရမလားမသိဖူး အဲဒီ RRT software လုပ်ပုံလုပ်နည်းလေးကိုလဲပြောပြပါလားဗျာ ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဗျာ